Al-shabaab oo weeraray qeybo kamid ah Muqdisho
Dagaalyahano katirsan al-shabaab ayaa weerar ku soo qaadey qaarkamid ah degmooyinka gobolka Banaadir habeen nimadii xalay iyaga oo bartilmaameedsadey goobo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan dowladda. Goobjoogayaal ayaa kuwaramaya in xoogagga al-shabaab ay weerareen qeybo kamid ah degmooyinka Yaqshiid iyo Hiliwaa oo ay iskacaabin kala kulmeen ciidamo kusugnaa xarumaha ay...
Warmurtiyeed ka soo baxay shirkii IGAD oo lagu muujiyey taageero loo fidiyay Sooomaaliya
By somaliafocus Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo ka qaybgalay Shirweynaha 25aad ee aan caadiga ahayn ee Madaxweynayaasha Urur Goboleedka IGAD ee maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa soo dhoweeyay taageerada loo fidiyay dalka Soomaaliya iyo heshiiska Koonfurta Suudaan, waxaana uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaadda , looguna...
Saraakiil katirsan Qaramada Midoobey oo lakulmey maamulka Xudur
Wafdi ka socda Q.M. ayaa booqsho gaaban ku tagey magaalada Xudur ee xaruunta gobolka Bokool oo dhowaan laga saarey Xoogagga al-shabaab oo muddo maamulayey. Xubno wafdiga ah oo ay kujireen saraakiil dhinac caafimaadka ka shaqeeya ayaa kulamo la qaatey saraakiisha Soomalida iyo kuwa AMISOM iyo maamulka degmada Xudur. Saraakiisha ka socodey Q.M. ayaa u kuurgaley xaaladaha...
Xoogagga al-shabaab oo weerarey Buurdhuubo iyo abaabul ciidan oo kajira Baardheere
Wararka ka imaanaya Degmada Buur-dhuubo ee Gedo ayaa kuwaramaya in Xalay halkaasi uu ka dhacay Dagaal u dhexeeya Ciidamada Dowlada oo kaa shanaya kuwa ahlusuna iyo xoogagga Al-shabaab ee xulafada la ah ururka al-Qaida. Dadka deegaanka ayaa ku waramey in dagaal dhinacyadan u dhaxeeya uu ka dhacey gudaha Buurdhoobo balse aan la ogeyn qasaaraha kala gaarey labada dhinac....
Qof rayid ah oo lagu diley Degmada Xamar weyne
By Somaliafocus Askari katirsan ciidamada darawiishta ayaa qof rayid ah xaley ku diley Suuqa Dahablaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banadir sida goob jogayaa ay u sheegeen xafiiska Somaliafocus ee magaalada Muqdisho. Askariga ayaa goobta ka baxsadey kaddib markii uu geystey falka dilka ahaa iyada oo ay soconayaa baaritaano ku aadan dhacdada hasee yeeshee gudoomiyaha degmada...
By Somaliafocus Ciidamo katirasan dowladda federaalka ayaa maanta hawlgallo ka sameeye deegaano katirsan Muqdisho oo ay kamid tahay degmada Wadajir. Howlgalka ayaa lagu soo qab qabtey dad u badan dhalinyaro kuwaasi oo badankood laga soo qabtey xaafada Buulo-Xubey, waxaana loo gudbiyey saldhiga degmada wadajir. Goobjoogayaal ayaa Somaliafocus u sheegey in ciidamada ay...
Qoysas barakacaya iyo xiisado colaadeed oo kajira Shabeelaha hoose
By Somaliafocus Qaar kamid ah qoysaskii ku noolaa deegaano aktirsan gobolka Shabelada hoose ayaa bilaabey in ay barakacaan kaddib xiisado colaadeed oo laga soo sheegey halkaasi. Arintan waxay kadmabeysay kaddib dagaalo ka soo cusboonaadey deegaanka Busley ee gobolka Shabeelaha hoose waxaana jira baaqyo kasoo yeeraya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka. Sida wararku ay...
Fanaanka Maxamed Suleyman Tubeec oo ku geeriyooday Jarmalka
By Somaliafocus Fanaanka Maxamed Suleyman Tubeec oo loo yaqaanay Boqorka Codka ayaa saaka ku geeriyooday cisbital ku yaala dalka Jarmalka oo uu in muddo ah ku xanuunsanayay. Mustafa Maxamed Suleyman Tubeec oo ah inan uu dhalay fanaanka geeriyooday ayaa RWarbaahinta u xaqiijiyay geerida Allaha u naxariistee Maxamed Suleyman Tubeec isagoo sheegay in mudadii uu ku jiray cisbitalka...
Askar lagu toogety Magaalada Muqdisho
(SOFO) Xukunka dilka ah oo ay fulisey Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ka dhacay Iskool bulusiyo ee magaalada Muqdisho waxaana goobta kusugnaa saraakiil dowlada katirsan, maamulka gobolka banadir iyo sarakiil katirsan ciidamada militeriga. Maxkamada ayaa xukunka dilka ah ku fulisey seddex askari oo katirsanaa ciidamada militeriga dowlada Somaliya iyo kuwa dowladda...
Kenya oo dib u furaneysa safaradeeda Soomaaliya
By Somaliafocus (SOFO)– Dowlada kenya ayaa dib uga fureynaysa magaalada Muqdisho xafiiskeeda howlgalka Diplomasiyada dhamaadka sanadkan sida laga soo xigtey saraakiil sare oo katirsan dowlada Kenya. ” Waxaan ognahay in xaalad khatar ah ay jirto marka laga hadlayo hirgelinta barnamijka diplomasiyada hasee yeeshee tani waxay caawineysa dowlada federalka oo u...